Matt Caldwell, vondrona mailaka mamorona ny Yesmail
Lahatsoratra nosoratan'i Matt Caldwell
Mpisava lalana mpamorona mailaka nanomboka ny taona 1999, izy no mpanorina ny YesmailNy vondrona Creative Services nahazo loka (ny mpanjifa dia misy HP, Coca-Cola, At & T, eBay, Kodak, Microsoft, Intel, Warner Bros & maro hafa). Nahazo mari-pahaizana licence momba ny marketing avy amin'ny oniversiten'i Indiana i Matthew ary nianatra momba ny endrika kanto / sary ao amin'ny The Pacific Northwest College of Art sy ny Oregon College of Art & Craft. I Matthew dia talen'ny famoronana ho an'ny ThrustMaster, Labtech, Logitech ary @Oce taloha.
Manambatra ny tetika hampitomboana ny fifandraisan'ny mailakao
Talata, Aprily 7, 2015 Matt Caldwell
Ny mailaka dia nampindrana ny tenany tamin'ny marketing hatramin'ny niorenan'ny sehatra. Raha toa ny "mailaka elektronika" indray mandeha dia naneho ny mailaka paositra tamin'ny endriny sy ny asany, ny fahaizan'ny sehatra dia midika fa ny hafatra tsirairay dia tokony ho azy manokana, azo ampifanarahana ary ampifandraisina amin'ny mpihaino isan-karazany. Amin'ity taona ity, ny mpivarotra dia mila mijanona tsy mihevitra ny teknolojia mailaka sy paikady ho toy ny fitaovana irery, fa kosa ho ampahany amin'ny ankamantatra lehibe kokoa sy mahasarika. Ny fanaovana izany dia hamela ny mpivarotra hanana fahaiza-mamorona, manavao ary mahira-tsaina